» पुर्ब राजाको कडा आलोचना गर्दै प्रम का प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले यसो भने,जनताभन्दा आफ्नो छोरा पारस शाह टुहुरोजस्तो भएको छ, उनको ख्याल राख्नु! पुर्ब राजाको कडा आलोचना गर्दै प्रम का प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले यसो भने,जनताभन्दा आफ्नो छोरा पारस शाह टुहुरोजस्तो भएको छ, उनको ख्याल राख्नु! – हाम्रो खबर
पुर्ब राजाको कडा आलोचना गर्दै प्रम का प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले यसो भने,जनताभन्दा आफ्नो छोरा पारस शाह टुहुरोजस्तो भएको छ, उनको ख्याल राख्नु!
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सन्देशमा भनेका छन् ;जनतालाई बचाउन सके मात्र राज्य बच्ने र राज्य रहे मात्र राजनीति बांच्ने आत्मबोध सबैमा हुनु पर्दछ ।
संकटको घडीमा अविभावकको क्षमता र हैसियत स्पष्ट हुन्छ भन्ने आम मान्यताका आधारमा हेर्दा सबै नेपाली जनता अविभावक बिहीन टुहुरा बनेको पीडाबोध यति बेला हुँदैछ ।
पूर्वराजाको उक्त सन्देशमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले शुक्रबार बिहान ‘नेपाली बहस’मा अन्तर्वार्ता दिँदै नेपाली जनताभन्दा पूर्वराजाका छोरा पारस शाह टुहुरोजस्तो भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
सल्लाहकार थापाले पूर्वराजाकै छोरा पोखरातिर भौंतारिँदै बिगोकले हिंडिरहेको भन्दै आफ्नो छोरोको राम्रो हेरचाह गर्न सुझाव दिए । आफ्नै छोरो टुहुरोजस्तो भएर हिंडिरहेको बेला जनता टुहुरा भए भनेर टिप्पणी गर्नु उचित नभएको थापाको जवाफ थियो ।